भाइरसले रुप फेर्‍यो, नेताले रंग फेरे, जनताको अवस्था कहिले फेरिने ?
१९ जेठ, २०७८
पहिलो चरण देखी नै कोरोनाले डम्फु ठोकिरहेको बेला दोस्रो चरणको निषेधाज्ञा सम्म आइपुग्दा आफ्नो स्वरुप नै फेरिरहेको छ, आफुलाई झन सुधार गर्दै गइरहेको छ । विभिन्न पत्रपत्रिका तथा अनलाईन समाचारमा त यस्को भेरियन्ट ५ वटा हुने रे, मतलव झन आफुलाई शक्तिशालि सावित गर्दै आफ्नो अस्थित्व बचाइराख्न विश्वमा नै संक्रमित संख्या ह्वात्तै बढाएको छ । झन शक्तिशाली देशलाई वर्वाद बनाएको छ । दैनिक नेपालमा मात्र संक्रमित हुने संख्या सयौ, हजारौं थपिरहेका छन् ।
नेपाली राजनीतिक परिवेशमा हेर्ने हो भने वि.स. १९०३ देखि २००७ साल सम्म आर्थत १०४ वर्षे एक छत्र रुपमा राणाहरुले शासन चलाएका थिए । मुलुकमा प्रजातन्त्रको स्थापना गर्नको लागि भएको २००७ साल क्रान्तिको सफलता पश्चात प्रजातन्त्रको बहाली पछि लागु भएको नेपालको अन्तरिम विधान २००७ बाट मात्र राजनीतिक दलहरुले वैधानिक रुपमा मान्यता प्राप्त भएको इतिहास स्मरणीय छ । यति लामो राजनीतिक पृष्ठभुमिमा रुमलिएको नेपाली जनता अहिले कोरोनासंग जुधिरहेका छन् । देशमा राजनीति चुलिएको दशकौं वितिसकेको छ । २००७ साल देखिकै सेरोफेरोमा रुमलिएको राजनीतिक व्यवस्था सुरुवात भए देखि नै पञ्चायति व्यवस्था, प्रजातान्त्रीक व्यवस्थाको फेरवदली र पछिल्लो समयमा दशौ हजार जनताको वलिदान पश्चात आएको गणतन्त्रसम्म हेर्ने हो भने राजनीतिक व्यवसायी गर्ने टपरे नेताहरुमा सामान्य नैतिकता समेत पुर्णरुपमा लोप भैसकेको सर्वविदितै छ ।
म जस्ता हजारौं युवाहरुले बुझेको राजनीतिक बेग्लै रहेछ । राजनीति व्यवसाय होइन, राजनीति पेशा होइन, छलकपट होइन र गफका कारखाना होइन । निस्वार्थ समाज सेवा हो । जसलाई केन्द्र बनाएर आफुले सोचेको समाजलाई सहि मार्गतिर लम्काउदै देश र जनताको हित र समग्र देश विकासको खाका हो । तर, विडम्बना राजनीतिमा होमिएका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिदेखि केन्द्रीय सरकारका प्रमुखहरु यतिवेला जनताको सास र लाससंग राजनीति गरिरहेका छन् ।
साच्चिकै जनताको सेवा गर्ने उदेश्यले राजनीतिमा होमिएको भए, अहिले पद र कुर्सी त्यागेर जनता बचाउन तर्फ लाग्नु पर्ने हो । गाउँ गाउँमा सिंहदरबारको मुल नारा बोकेर जब संघीय संरचना अनुसार स्थानिय सरकार लागु भयो तब देखि झन फोहोरि राजनीति खेल सुरु भयो । गाउँका सामान्य विद्यालय, संघ संस्था, सहकारी, विकाश निर्माणका योजनाहरु, अनुदानका कार्यक्रम, कर्मचारी नियुक्ती लगायतका क्षेत्रमा समेत राजनीति भागभन्डाको थलो बनाएका छन् ।
गाउँ गाउँमा, टोलटोलमा, चोकचोकमा छुट्टा छुट्टै फलानो पार्टीको विद्यालय, फलानो पार्टीको सहकारी, फलानो पार्टीको संस्था, फलानो पार्टीको मान्छे भन्दै गर्ने विभेदले राजनीतिलाई पूर्ण रुपमा फोहोरी खेल बनाइएको छ ।
यतिमात्रै होइन विश्वलाई नै तहसनहस पारिरहेको कोरोना भाइरस गाउँ पसेसंगै जनताको सास र लास संग पनि राजनीति गरिरहेको प्रस्ट देख्न सकिन्छ । कोरोना इन्टिजेन परिक्षण देखि अस्पतालमा अक्सिजन .तथा आइसोलेसन व्यवस्थामा निकै चलखेल भएको पाइन्छ । प्रसस्त पैसा भएका व्यक्ति र नेताको झोला बोक्ने झोलेहरुले पहुंचको आधारमा उपचार पाएपनि सर्वसाधारण जनताहरु उपचार नपाएर छटपटाउदै मरेको छन् । अझै कति मर्ने हुन कुनै यकिन छैन ।
गरिव जनताको स्वास्थ्य उपचारमा न त कुनै किसिमको व्यवस्थापन छ, न त कुनै कार्यक्रम नै ? देश र जनता प्रति माया भएका कुनै राजनीतिको झन्डा नबोकेका युवाहरु यति वेला स्वतन्त्र रुपमा जनताको सेवक बनिरहेको छन् । दैनिक परिवारिक गुजारा चलाउन बैदेशिक रोजगारमा सयौंकोश टाढा पुगेका नेपालीहरुले आफुले खाने छाक कटाएर नेपाली जनताको उपचारका लागि सहयोग गर्दै निरिह सरकारलाई चुनौति दिइरहेका छन् ।
हुन त विकाश तथा परिवर्तन भन्ने चिजहरु राजनीतिबाट मात्र प्राप्त हुने कुरा होइन । जाबो कोरोना भइरसले त छोटो समयमै तिन चरणको रुपमा देखा परिसक्यो । तर, झण्डै शताब्दी फेरिनै लाग्दा समेत नेपाली जनताको अवस्था भने फेरिन सकेन, यता नेताहरु हेर्ने हो भने, हिजोका दिनहरुमा फाटेका लुगा, बाँटा चप्पल पड्काउदैं विशुद्ध जनताको सेवा गर्ने उदेश्य देखाई राजनीतिमा होमिएका ति नेताहरु अहिले आलिशान महल, चिल्ला गाडी, चिटिक्क मिलेका लुगा र परिवारको जीवन शैलीले नै नेताको उदेश्य छर्लङ्ग पारेको छ ।
किन भने राजनीतिज्ञले पार्टीको दर्शन नीति अनुसार सोच्छ र पार्टी बलियो बनाउन खोज्छ तर, नेताले देश विकास सोच्छ । यहाँ ट्याक्कै उल्टो भइरहेको छ, नेताले पार्टी बलियो बनाउन खोज्नु, कार्यकर्ता पालनपोषण गर्नु, देश भन्दा पहिला पार्टी देख्नु, जनता नदेख्नु लगायतका क्रियाकलापले राजनीतिलाई धमिलो बनाइरहेको छ । अन्य विकशित राष्ट्रहरुमा विकास निर्माण तथा अन्य योजना बनाउन १ प्रतिशत, र कार्यान्वयन गर्न ९९ प्रतिशत ध्यान दिइन्छ । तर, नेपाल भने ९९ प्रतिशत योजना बनाउने, खाका तयार गर्ने, दस्तावेश भर्ने र कार्यान्वयन भने १ प्रतिशत मात्र हुन्छ । जसले गर्दा नेपालमा विकास निर्माणका कार्यहरु दशकौं देखि अधुरै छन् ।
जो नेता आफ्नो कालखण्ड भरी भ्रष्ट भएर बाँच्छ, उसले न मान्छे भएर मर्न पाउछ न त नेता भएर मर्छ । केवल मर्छ त भ्रष्ट नेता भएर मर्छ । मान्छेको जन्म मान्छेबाट हुन्छ, तर नेताको जन्म समाजबाट हुन्छ । हरेक समाजले आफ्नो हैसियत अनुसार नेता जम्माउछ । हामीले आजसम्म कस्ता नेता जन्मायौ त ?
(-लेखक–माण्डवी ग्रामीण विकास संस्था प्यूठानका अध्यक्ष हुन)
बुधबार १९, जेठ २०७८ १२:४९:२९ मा प्रकाशित
कोपा अमेरिका फुटबल – अर्जेन्टिना र चिली आमने सामने हुँदै